Morondava : Nahazo fotodrafitrasa maro -
AccueilSongandinaMorondava : Nahazo fotodrafitrasa maro
Morondava : Nahazo fotodrafitrasa maro
Mitohy hatrany ny asa fampandrosoana ataon’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina manerana ny Nosy. Ankoatra ny fanamboarana ny “Route des Œufs” na lalan’ny Atody tany Mahitsy sy ny fanamboarana ny Lalam-pirenena Fahadimy tapany “A” (RN5A), omaly, dia tonga nitokana ireo fotodrafitrasa fototra maro tany Morondava ny Filohan’ny Repoblika. Hafaliana mihoa-pampana ny an’ireo mponin’i Menabe tamin’ny fahazoana ireo fotodrafitrasa izay mipaka mivantana amin’ny filàn’ny mponina.
Anisan’ny fotodrafitrasa goavana natolotry ny Filoha Hery Rajaonarimampianina tamin’izany ny seranam-piaramanidina, izay nampitondraina ny anarana André Resampa. Mampiavaka ny Faritra Menabe ny fahavitan’ity seranam-piaramanidina ity satria afaka mandray sidina iraisam-pirenena. Ankoatra io fotodrafitrasa eo amin’ny fitaterana an’habakabaka io, dia natolotry ny Filoham-pirenena ny vahoakan’i Menabe ihany koa ny Tranoben’ny Tahirim-bolam-panjakana. Hivaha, araka izany, ny olan’ny mpiasam-panjakana am-perin’asa na efa misotro ronono amin’ny fahavitan’izany. Tsy ireo mpiasam-panjakana ihany fa hatramin’ireo orinasa tsy miankina ihany koa dia hisitraka io Tranoben’ny Tahirim-bolam-panjakana io.
Ankoatra ireo, natomboka ihany koa ny fametrahana fisintoman-drano fisotro madio miisa 200 tao amin’ny Kaomina Bemanonga. Fotodrafitrasa hamatsy rano ho an’ny olona miisa 200 000 amina kaomina miisa 56 ao amin’ny Faritra Menabe izany. Anisan’ny nanahirana ny vahoaka any an-toerana mantsy ny famatsian-drano fisotro madio. Novahan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina, araka izany, ny olan’ny mponina amin’iny faritra iny ankehitriny. “Mila mijery lavitra sy ny lafatra ho an’ny firenena isika, ary mila maneho ny tena fitiavan-tanindrazana”, hoy izy tamin’izany.